Mayelana NATHI - Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd.
Iphrofayela Yenkampani Yethu
Jilinyuantong Mineral Co., ltd. etholakala eBaishan, esifundazweni saseJiling, lapho kukhona khona i-diatomite esezingeni eliphakeme kunazo zonke eChina ngisho nase-Asia, inenkampani eyi-10 subsidiary, 25km2 yendawo yezimayini, indawo yokuhlola eyi-54 km2, amathani angaphezu kwezigidi eziyi-100 ezinqolobane ze-diatomite ezibiza ngaphezu kuka-75% yazo zonke izinqolobane eziqinisekisiwe zaseChina. Sinemigqa yokukhiqiza eyi-14 ye-diatomite ehlukahlukene, enekhono lokukhiqiza lonyaka elingaphezu kwamathani ayi-150,000.
Kuze kube manje, e-Asia, manje sesingumkhiqizi omkhulu we-diatomite ehlukahlukene enezinsiza ezinkulu kunazo zonke, ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu kanye nesabelo semakethe esiphakeme kunazo zonke eChina nase-Asia. Selokhu yasungulwa ngo-2007, sesisungule ibhizinisi elicubungula izinsizakusebenza elihlanganisa izimayini ze-diatomite, ukukhiqiza, ukuthengisa, ne-R & D ngokuxhaswa ngabangani abavela kuzo zonke izizinda zokuphila.
Ngaphezu kwalokho, sithole i-ISO 9 0 0 0, iHalal, iKosher, uhlelo lokuphathwa kokuphepha kokudla, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, izitifiketi zokukhiqiza zokudla. Ngokuphathelene nokuhlonishwa kwenkampani yethu, Siyi-unit yosihlalo weChina Non-metallic Mineral Industry Association Committee, i-diatomite filter filter industry standard ejwayelekile yokubhala kanye neJilin Province Enterprise Technology Center.
Hlala njalo ngenhloso "yamakhasimende kuqala", sinentshiseko yokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ngezinsizakalo ezilula nezicabangelayo nezeluleko zobuchwepheshe. UJilin Yuantong Mineral Co., ltd uzimisele ukwenza abangani abavela kuwo wonke umhlaba futhi bahlanganyele izandla ukwakha ikusasa eliqhakazile.
Umkhiqizi wokuqala we-diatomite e-China.
Ngaphezu kokukhishwa konyaka
Isabelo semakethe singaphezu kuka-60%